Connectify Hotspot Pro + Dispatch Pro 7.2.1.29658 + Activator - အမျိုးကောင်းသား
Home » နည်းပညာ » Connectify Hotspot Pro + Dispatch Pro 7.2.1.29658 + Activator
Connectify Hotspot Pro + Dispatch Pro 7.2.1.29658 + Activator
By Zin Min Tun
သင်၏ laptop တစ်လုံးကို wifi hotspot အဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါသလား ? (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းများကို စုပေါင်းပြီး ပိုကောင်းတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုလိုပါသလား ? အဲ ဒါဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ကျွန်တော်အခုပေးမဲ့ software လေးက အဆင်ပြေ စေမှာပါ။
Connectify hotspot ဟာဆိုရင် laptop ကို wifi access point အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီး wifi security password ပါ ပေးထားလို့ရပါတယ် သင့် laptop မှာရှိတဲ့ အင်တာနက်ကို တခြား device တွေဆီကို share လည်းပေးလို့ရပါတယ် ကျနော်သုံးတာကတော့ laptop အချင်းချင်း ချိတ်ပြီး game ကစားတာပါပဲ :P
Connectify Dispatch ကတော့ ကျနော့မှာ adsl တစ်လိုင်းရှိတယ် မိုဘိုင်းအင်တာနက် တစ်လိုင်းရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့ လိုင်းနှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းပြီး ပိုကောင်းတဲ့ speed နဲ့ သုံးတာပါ လိုင်းအရေအတွက် တော်တော်များများကို ပေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်။. ကျနော်ကတော့ software တွေ download ဆွဲရင်သုံးတယ် အထူးသဖြင့် resume မရတဲ့ download တွေဆိုရင်သုံးတယ် ကဲပြောတာများသွားပြီ ကိုယ်တိုင်သာစမ်းကြည့်ကြပါတော့သူငယ်ချင်းတို့ ;)
ပြန်လည်တင်ပြသူ zin min tun အချိန် 6:43:00 PM
Htin Lin March 21, 2014 at 9:27 AM
Htin Lin March 21, 2014 at 9:30 AM
Lewis David June 13, 2014 at 11:14 PM
Activate lout tar Activate မဖြစ်ဘူးဗျာ ကူညီပါဦး
NEX All Firmware
Nex မော်တွေအတွက် အကုန်ရတယ်ဗျာ အောက်လိပ်စာမှာဝင်ပီး ကိုယ်လိုတဲ့ မော်ဒယ်သာရွှေးပေးတော့ Download>>>>> stockromne...
Oppo A39 flashtools firmware (1.2G)
Oppoa39 flashtools firmware လေးပါဗျာ အသုံးလိုတဲ့ ငယ်ချင်းတွေအတွက် CM2 နဲ့ ထုတ်ပီးတော့ အချိန်ပေးပီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေဗျာ ...
VA - Tanecni Liga 156 (2014)[Album]MP3-256kbps
Artist: VA Title Of Album: Tanecni Liga 156 Year Of Release: 2014 Label: Universal Genre: Pop, Dance Tracklist: 1.DADA LIFE - This...
KENBO E71 FlashTools Firmware
အဆင်ပြေလို့ တင်ပေးထား Free တော့ ဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ လိုအပ်ရင်ဆက်သွယ်လိုက် လင့်ချပေးမယ် တစ်ရက်အတွင်းပီးအောင်ဒေါင်း :P ဘေ သုံးထောင် :D ...
ASTON Premium Firmware
Download>>>> Google Driver
ZTE Q503U Firmware
လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ယူစေဗျာ မစမ်းရသေး Official Firmware Download>>> /d-h.st/
Zawgyi-One Flip Font Apk v1.1 (5Mb) Direct Downlod
Zawgyi-One Flip Font အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ Update လေးပါ Myanmar Mobile Developer ကိုမျိုးမင်းလတ်ရဲ့ဖန်တီးမှု့လေးပါ။ Samsung Brand အာ...
ရှုမောင် – Soul of Shoot(2014)[Album]Mp3-128Kbps
ငပိန်ရဲ့သင်္ကြန် v1.0 for iPhone/iPod/iPad ( 30MB ...
VA – Rio2(Music From the Motion Picture)(2014)[A...
ချမ်းချမ်း နှင့် ကြယ်ပွင့်ကလေးများ(2014)[Album]MP3...
Britney Spears – That Hits 2014(2014)[Album]
VA – Electro City - Myanmar New Year 2014(2014)[Al...
[For 18+ Only] [Download Center] Playboy USA – Sex...
[Only For 18+] [Download Center] Nuts UK - 28 Marc...
တွယ်တာ - ကိုကြွယ်ကြီး(2014)[Album]MP3-128Kbps
VA - သင်္ကြန်ပြဇာတ်(2014)[Album]MP3-128Kbps
Super Junior-M - Swing(2014)[Album]MP3-128+320Kbps...
Shakira – Shakira.(Deluxe)(2014)[ Album]MP3-128Kbp...
Connectify Hotspot Pro + Dispatch Pro 7.2.1.29658 ...
ဘာဘူ - 2014 (2014)(Album)MP3-128Kbps
ကွန်ပျူတာမလိုအပ်ဘဲ Android ဖုန်းမှတစ်ဆင့် Print ထု...
Facebook Version အမြင့်တွေအတွက် FB Video Downloade...
Facebook စွယ်စုံကျမ်း ( မြန်မာလို - EBook )
VA - Star တို့ရဲ့သင်္ကြန်(2014)[Album]MP3-128Kbps
စုချစ်ဇော် – Valentine’s Night (2014)[Album]MP3-12...
City Maps 2Go Pro Offline Maps ပြည့်စုံတဲ့ မြန်မာ့...
ဖုန်းထဲကနေ Root ဖောက်ပေးတဲ့ 360 Super ROOT v1.1 AP...
VA - Hello Music သင်္ကြန်(2014)[Album]MP3-192Kbps+Vi...
Viber ကို Emotion အလန်းသုံးချင်တဲ့သူများအတွက် Love...
အမြင့်ဖုန်းတွေအတွက် သိပ်မိုက်တဲ့ DSLR Camera Pro 2...
Advance System Care Pro 7.2.0.431 (full version) w...
Android အတွက် Version 4.3 အထိ Root လုပ်စရာမလိုဘဲ ထ...
Kaspersky Antivirus All Product Keys For PC ( Non...
ဆရာဦးမောင်နိုင် ၏ ဖုန်းစက်ပြင်မှတ်တမ်းစာအုပ်များစ...
VA - ပတ္တမြား FM - Radio to Live (2014) [Album]MP3-...
VA - နွေကကြိုးကဗျာ(သင်္ကြန်သီချင်းအသစ်များ)အပိုင်း(၂...
VA - နွေကကြိုးကဗျာ(သင်္ကြန်သီချင်းအသစ်များ)အပိုင်း(၁...
[For 18+ Only] Nuts UK -7March 2014 | 105MB
Apps Magazine UK - 50 Best Ever Apps + Best Downlo...
[For 18+ Only] Playboy USA - March 2014 | 108MB
[Restricted Post] [18+ only] Nuts UK - 28 February...
MiloShare FileUploader V.0.1.3(beta) Android Appli...
Wi-fi talkie v1.3 for Android 1.4MB (အင်တာနက်မလို...
MPT Service v1.3(Beta) New UI apk for Android 1.6M...
Myanmar Zodiac 2014 ဗေဒင် v1.2 apk For Android 4.3...
Flappy Bird v1.0 ipa for iPhone/iPad/iPod Touch
vShare v1.0.58 ipa for iPhone/iPad/iPod Touch 4.6...
လဝီ - နိဒါန်း(2014)[Album]MP3-128Kbps
စန္ဒီ(၁၅၀၀) - အမှတ်တရ(2014)(Album)MP3-128Kbps
အမျိုးကောင်းသား(ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း) v1.1 apk for an...
MX Player v1.7.25 apk for Andorid ( 8MB )
Ornagai v2.1.9 apk for Android ( 5MB )